Ngaba luncedo kangakanani ukuSebenza kweeNjini zoPhando kwi-shishini, ngokukodwa ngokubhekiselele kwiprojekti yakho encinane yokuthumela i-drop?
Namhlanje, abantu abaninzi banokuthenga izinto zabo ngokusebenzisa amandla amakhulu kunye ne-Intanethi. Yingakho i-dropshippers ibe yindawo eyaziwayo kakhulu ukwenza i-intanethi kwi-intanethi kwaye ufumane phantse nayiphi na into oyifunayo. Kwaye ngoku amaninzi okuthenga okunjalo ayenziwe lula, njengoko abantu basebenzisa nje iinjongo zokusesha ukufaka umbuzo wegama elingundoqo, kwaye ekugqibeleni, fumana oko bakufunayo. Kwaye kuza umbuso we-SEO! Kodwa ungayisebenzisa njani loo mandla amaninzi e-Search Engine Optimization kwishishini osebenzayo kwimodi yokuthumela i-drop? Ndiyincoma ukuba ndijonge ngokufutshane ngeengcebiso eziphambili apha ngezantsi - website companies. Ndiyathemba ukuba baya kunceda ezininzi iiprojekti zokuthutha i-novice ukuba ziphile kwihlabathi lokhuphiswano lobundlobongela bezobudlova ukususela ekuqaleni. Apha abo!
Yenza igama elichanekileyo lokupanda nge-Tail Long
Okokuqala, ukwenza i-Search Engine Ukulungiswa kwezoshishino, uyacetyiswa ukuqhuba uphando lwegama elingundoqo. Ndiyathetha apha kuya kufuneka ucinge ngamagama athile kunye nemibonakaliso, efanelekileyo kakhulu ibhishini lakho, kunye nokuba luninzi lusetyenziswe ngabasebenzisi kumbuzo wokukhangela xa ufuna iimveliso okanye iinkonzo. Ubuqhetseba kukufumana ukulinganisela okunempilo phakathi kokuthandwa kunye nokukhuphisana kakhulu kwi-niche. Ndiyathetha ukuba kukho izigidi ezininzi zezicelo zokukhangela ezifana ne "macbook pro 13", kodwa kakhulu ngaphantsi kwezona zifana "nexabiso elincinci le-black macbook pro 13". Gcina loo nto ingqondweni xa ukhetha amagama angundoqo omsila we-website yakho.
Yiba nomxholo oqinileyo wefuthe eliqokelelwayo
Khumbula - umxholo wakho kukumkani. Ungalokothi uzikhange ixesha lakho kwimizamo yokudala umxholo ophezulu, ocebile ngegama elide lomsila. Le ngcamango ilula - kufuneka nje ukuba umxholo wakho ube nolwazi (funda-luncedo) kwiindwendwe ngokusemandleni. Ukwenza ngale ndlela, zikhululeke ukufaka umxholo wakho wewebhusayithi kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezinomsebenzisi-friendly ezinjengevidiyo ze-YouTube. Oko kuya kunika iindwendwe zakho ingcezu yeengcebiso ezilungileyo, ukufundisa, okanye inkcazo yemveliso kunye nezikhokelo, ezikhokelela kwiziphumo zakho zokuthengisa eziphezulu. Ngexesha elifanayo, qhubeka ulandelelanisa umxholo wakho wokukhanga, ngokukodwa kwimbono yeenjini zokukhangela. Ukwenza njalo, ungakulibali ukuba uya kuyidinga ukuba uyanconywe ngabapaki bokukhangela, ulunge ngakumbi kwi-indexed by them, kwaye ngoko ke ubekwe phezulu kwimiphumo ye-Google. Leyo yindlela efanelekileyo yokwenza ishishini lokuthutha i-intanethi, elikuphi na kwihlabathi.
Imisebenzi efanelekileyo yeZakhiwo zeZixhumo
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiNjini yeeNzululwazi Ukulungiswa kweshishini yinkqubo yokwakha ikhonkco. Kuthetha ukuba kufuneka ube ne-backlink esemgangathweni edibanisa iwebhusayithi yakho kunye neminye imithombo ye-intanethi ukuze ufumane ukutyelela ngakumbi, ngoko ke ukwandisa i-traffic yakho, ukuphakamisa isikhundla sakho samanje kwiziphumo zophando ze-Google, nokunika ukuhamba okukhulu kwamakhasimende angathuthukiweyo, yaguquka yaba yinyani. Musa ukukhangela imizamo yokwenza izithuba kwiiforam, iividiyo ze-YouTube ezandul 'ukutshaywa, kunye namaqhagamshelwano ahlukeneyo aseburhulumenteni. Basenokuba sixhobo esilungileyo xa besetyenziswe ngobulumko. Ngokwam, ndincoma ukuqesha iingcali ukuba zenze le mi sebenzi kuwe ubuncinci ngokusebenzisa izigaba zokuqala zoshishino lwakho zophuhliso. Naluphi na umsebenzi wakho, awuyi kuzisola, ndiqinisekile.
Ekugqibeleni, inzuzo yangempela yoKhenketho lweeNjini zoKhenketho kwi-shishini ayikwazi ukulungelelanisa kwimimiselo emibini okanye emithathu kuphela. Kodwa ndiyathemba ukuba izikhokelo zam ezimfutshane ziza kunceda ezinye i-novice dropshippers ngokwaneleyo, ngoko ke ndiza kuhoxisa apha!